အူရီဒူး VIP အစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ
အူရီဒူး VIP အစီအစဉ်ဆိုသည်မှာ သုံးစွဲသူများကို ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သည့်အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေအား VIP ကဲ့သို့ ခံစားစေမှာဖြစ်ပါသည်။
My Ooredoo App ထဲမှ Ooredoo VIP အစီအစဉ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ကြိုဆိုအမှတ် ၅၀မှတ်ကိုအခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်းငွေ ၁,၀၀၀ ကျပ်ဖြည့်တိုင်း အူရီဒူး VIP အတွက် ၁၀ မှတ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ၄င်းအမှတ်များဖြင့် ဆုလက်ဆောင်များကို လဲလှယ်ရယူခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင် အူရီဒူးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ နေရာပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှလည်း အထူးလျော့ဈေးများကိုရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ဒါ့အပြင် Spins the wheel ကစားပြီး 50GB နဲ့ 10GB ဒေတာလက်ဆောင်အပြင် အခြားစိတ်လှုပ်ရှားစရာဆုလက်ဆောင်များကိုလည်းမကြာခင် ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
အူရီဒူးနဲ့ဆို အားလုံးက VIP ဖြစ်နိုင်တယ်။
My Ooredoo App ကို အခုပဲဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ပြီး ဆုလက်ဆောင်တွေရယူဖို့ အမှတ်တွေစုဆောင်းလိုက်ပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့ My Ooredoo App ကို Update ပြုလုပ်မည်ဆိုပါကလည်း 100MB ဒေတာလက်ဆောင်ကို အလိုလျောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
ဒီသတင်းကောင်းကို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို မျှဝေလိုက်ပါ။
မိတ်ဆွေရဲ့ My Ooredoo App ကို Update လုပ်ရန်
အူရီဒူး VIP ဆိုတာဘာလဲ?
အူရီဒူး VIP ဆိုတာဟာ အူရီဒူးသုံးစွဲသူများအား အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ဆုလက်ဆောင်များပေးခြင်း အစီအစဉ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အစီအစဉ်သည် အူရီဒူးသုံးစွဲသူများအတွက် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့ နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အမှတ်များရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
အူရီဒူး VIP အစီအစဉ်မှာဘာကြောင့်ပါဝင်သင့်သလဲ?
VIP အားလုံးသည် အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့် ဆုလက်ဆောင်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အမှတ်တွေ ရရှိမှာပါ။ ရရှိထားတဲ့အမှတ်တွေနဲ့ ဆုလက်ဆောင်တွေကို လဲလှယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် ဆုလက်ဆောင်တွေနှင့် အတူ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အူရီဒူး VIP အစီအစဉ်ကို ဘယ်သူတွေပါဝင်ခွင့်ရှိလဲ?
အူရီဒူး VIP အစီအစဉ်ကတော့ ကြိုတင်ပေးချေစနစ် သုံးစွဲသူများ (ငွေဖြည့်ကတ်နှင့် EVC အသုံးပြုသူများ) အတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
အူရီဒူး VIP အား ဘယ်လို ရရှိနိုင်မလဲ?
My Ooredoo App ရှိ VIP icon အား နှိပ်ပြီး ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အူရီဒူး VIP အတွက် မည်သည့် ထပ်ပေါင်းကုန်ကျစရိတ်များ ပေးရန်လိုအပ်ပါသလား?
အကယ်၍ အူရီဒူး VIP အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပါက လက်ရှိ ဖုန်းအသုံးပြုမှုနှုန်းထားများ နှင့် package များ ပြောင်းလဲမှုရှိသလား?
ပြောင်းလဲမှု မရှိပါ။ အပိုဆုလက်ဆောင်များပါ ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်များအား ဘယ်လို ရရှိနိုင်မလဲ?
ဖုန်းငွေ ၁,၀၀၀ ကျပ်ဖြည့်တိုင်း ၁၀ မှတ် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အမှတ် မြန်မြန်ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ?
VIP အဆင့်မြင့်လေလေ အမှတ်မြန်မြန်ရလေဖြစ်ပါသည်။
VIP Platinum ဖြစ်ပါက ၁,၀၀၀ ကျပ်ဖြည့်တိုင်း အမှတ် (၁၅) မှတ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
VIP Platinum Plus ဖြစ်ပါက ၁,၀၀၀ကျပ်ဖြည့်တိုင်း (၂၀) မှတ် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရရှိထားသော အမှတ်များကို ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မလဲ?
အမှတ်တွေကို အသုံးပြုပြီး သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် ဆုလက်ဆောင်များကို လဲယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် ဆုလက်ဆောင်များကို ကံစမ်းရယူမည့် Spinning Wheel ဂိမ်းကစားရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒေတာ Package နှင့် Voice Plan များ ကိုလည်းလဲလှယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်များအား ဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲ?
အူရီဒူး VIP ရဲ့ MyRewards section ကိုသွားပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဆုလက်ဆောင်များကို အမှတ်များဖြင့် လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါသည်။
မိမိရဲ့ အမှတ်များအား သုံးရန် ဘာတွေ လိုအပ်ပါသလဲ?
အမှတ်များကိုစတင်လဲလှယ်နိုင်ရန် VIP Silver နှင့် အထက် အဆင့်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး VIP Silver ဖြစ်ရန်အတွက် ငွေများများဖြည့်ပြီး အမှတ်များများ ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
My Ooredoo VIP အမှတ်များရဲ့ သက်တမ်းသည် မည်မျှ ရှိသလဲ?
အမှတ်များ အားလုံး၏ သက်တမ်းမှာ ၆ လဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်မလိုအပ်ဘဲ အခမဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ ဆုလက်ဆောင်များပါသလား?
ရှိပါတယ်။ VIP တိုင်းအတွက် အမှတ်မလိုအပ်ဘဲ၊ ဆုလက်ဆောင်များကို အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အူရီဒူး ဒေတာ Pack များကို မိမိရဲ့ အမှတ်များနဲ့ဝယ်လို့ရပါသလား?
ရပါတယ်။ ဒေတာ Pack များကို ၀ယ်ယူရန် VIP အမှတ်များအား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အူရီဒူး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Pack များကို မိမိရဲ့ အမှတ်များနဲ့ ၀ယ်လို့ရပါသလား ?
ရပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Pack များကိုဝယ်ယူရန် VIP အမှတ်များအား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁ရက်ထဲမှာ ဆုတစ်ခုထက်ပိုပြီးလဲလှယ်ရယူနိုင်ပါသလား ?
ရပါတယ်။ အမှတ်များအားလုံးကို အချိန်မရွေးလဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ဒေတာ pack (သို့မဟုတ်) ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမိနစ်များရရှိပြီးကြောင်းဘယ်လို သိရှိနိုင်မလဲ?
ဒေတာအစီအစဉ်များ (သို့မဟုတ်) ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမိနစ်များ ရယူပြီးဖြစ်ကြောင်း SMS ပေးပို့ အကြောင်းကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
အူရီဒူး VIP မှာ အဆင့်မည်မျှ ရှိသလဲ ?
VIP, VIP Silver, VIP Gold, VIP Platinum, VIP Platinum Plus စသည့် အဆင့် (၅) ဆင့်ရှိပါသည်။
နောက်အဆင့်တစ်ခု တက်သွားရင် အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ?
VIP Silver မှာဆိုရင် မိတ်ဆွေရရှိထားတဲ့ အမှတ်တွေကို စတင်အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ရွှေဒင်္ဂါးပြားများ ၊ ဆိုင်ကယ် နှင့် မော်တော်ကား အစရှိသော ကံစမ်းမဲဆုကြီးတွေပါဝင်သည့် Spinning Wheel လှည့်၍ ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ဒေတာ Pack တွေ အပြင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Pack တွေပါဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
VIP Gold အနေနဲ့ဆိုရင် Spinning Wheel လှည့်ပြီး ကစားတဲ့ အချိန်တိုင်း သုံးစွဲသူအနေနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်မံကစားနိုင်မည့် အခွင့်ရေးပါထပ်ရမှာဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ဆုတွေရနိုင်ဖို့ အခွင့်လမ်းပိုများမှာဖြစ်ပါတယ်။
VIP Platinum အနေနဲ့ဆိုရင် အမှတ်တွေအမြန်ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၁,၀၀၀ ကျပ် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ၁၅ မှတ် ရရှိနိုင်မှာပါ။
VIP Platinum Plus ဆိုရင်တော့ ၁,၀၀၀ ကျပ် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း အမှတ် ၂၀ ရရှိမှာ ဖြစ်သလို Spinning Wheel ကို နှစ်ကြိမ်အပို လှည့်ပြီး ကံစမ်းနိုင်မည့်အခွင့်ရေးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်အဆင့်ရောက်နေပြီဆိုတာ ဘယ်လို သိရှိနိုင်မလဲ ?
နောက်အဆင့်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းကြားချက် လက်ခံရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ My Ooredoo App အားဝင်ရောက် ချိန်တွင် မိမိ၏ အဆင့်အား စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
မိမိရဲ့ အူရီဒူး VIP အဆင့်အား ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသလား?
စာရင်းသွင်းပြီး ပထမ(၃) လမှာတော့ မိမိရဲ့အဆင့်အား မဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။ နောက်ထပ်(၃)လအတွင်းမှာ မိမိရဲ့ အဆင့်အားထိန်းသိမ်းရန် (သို့မဟုတ်)အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လုံလောက်သည့် အမှတ်များရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမှတ်များလုံလောက်မှုမရှိပါက မိမိရဲ့ ရရှိထားသောအဆင့်နှင့် အခွင့်ထူးများအားလုံးဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Spin Wheel ဂိမ်းအား ဘယ်နှစ်ကြိမ် ကစားနိုင်ပါသလဲ ?
VIP တိုင်းသည် တစ်လမှာ ၅ ကြိမ် ဂိမ်းကစားနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍မိမိရဲ့ အသင်းဝင်ခြင်းအား ရပ်စဲမည်ဆိုလျှင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?
မိတ်ဆွေရဲ့ထွက်ခွာမှုအတွက် အူရီဒူးက ၀မ်းနည်းပါလိမ့်မည်။ မိတ်ဆွေရဲ့ VIP အမှတ်များ၊ အဆင့်များ နှင့် အခွင့်ထူးများအားလုံး ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ထပ်မံပြီး ၀င်ရောက်ပါက ယခင် အမှတ်များအားလုံးအား ပြန်လည်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
အူရီဒူး VIP – ကျေးဇူးတုန့်ပြန်မှုအစီအစဉ် (“Loyalty အစီအစဉ်”) မှ ကြိုဆိုပါသည်။ အူရီဒူးမြန်မာလီမိတက် (“အူရီဒူး”) ၏ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုတိုင်း သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ရမှတ်များ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ My Ooredoo App ၏ Loyalty အစီအစဉ်တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း (“Loyalty အဖွဲ့ဝင်ခြင်း”) ဖြင့် သုံးစွဲသူ အနေဖြင့် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း Loyalty အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူမှ Loyalty အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နေစဉ် သုံးစွဲသူ နှင့် အူရီဒူးတို့အကြားမှ ဆက်ဆံရေးအား ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူမှ Loyalty အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်သည့် အချိန်မှစ၍ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အသက်ဝင်မည်ဖြစ်ကာ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် Loyalty အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရှိနေသည့် ကာလတစ်လျှောက်လုံး လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်ခွင့် အူရီဒူးတွင်သာ ရှိသည်။
‘အူရီဒူး VIP – ကျေးဇူးတုန့်ပြန်မှုအစီအစဉ်’ ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ဤအစီအစဉ်ကို အူရီဒူး သုံးစွဲသူအားလုံးမှ ကနဦးတွင် My Ooredoo App မှ ရယူနိုင်ပြီး နောင်တွင် USSD နှင့် ရယူနိုင်ရန် ချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
‘အူရီဒူး VIP အစီအစဉ်’ ကို အသုံးပြုပါက အူရီဒူး၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ ooredoo.com.mm ၌ ဖော်ပြထားသော အူရီဒူး၏ အခြေခံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
ဤ၀န်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းများကို အခြားသော promotion များ၊ offer များနှင့်လည်း ယှဉ်တွဲ၍ ခံစားနိုင်သည်။
အူရီဒူး၏အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတင်ပြ၍ ဤ၀န်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းကို ရုတ်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန်အခွင့်အရေး အူရီဒူးတွင်သာရှိသည်။
၁.၁။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စာရင်းသွင်းခြင်း
“My Ooredoo App” တွင် စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့်သာ Loyalty အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်နိုင်ပြီး Loyalty အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကို အူရီဒူး သုံးစွဲသူများသာ သီးခြားခံစားခွင့် ရှိသည်။ Loyalty အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရောက်ရိရန်နှင့် ရမှတ်များ စတင် စုဆောင်းနိုင်ရန် အတွက် စာရင်းပေးသွင်း (register ပြုလုပ်) ရမည် ဖြစ်သည်။
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို Loyalty အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးသည် Loyalty Account တစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
Loyalty အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကို အခြားသူထံသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ခန့်အပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။
သုံးစွဲသူ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စတင်ရောက်ရှိသည့်နေ့သည် သုံးစွဲသူ၏ စာရင်းသွင်းမှုကို My Ooredoo App မှတဆင့် အူရီဒူးမှ လက်ခံရရှိသည့်နေ့ပင်ဖြစ်သည်။
Loyalty အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း (register) ကို အခမဲ့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ယခုဖော်ပြထားသော ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူ မည်သူမဆိုအတွက် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကို ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့် အူရီဒူးတွင်ရှိသည်။
၁.၂။ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သုံးစွဲသူသည် My Ooredoo App မှ “Deregister” ကို ရွေးခြယ်ပြီးနောက် “Confirm” ကို ရွေးခြယ်၍ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ပြီး အူရီဒူးမှ Loyalty ရမှတ်များ အားလုံးကို နှုတ်ယူခြင်းအားဖြင့် သုံးစွဲသူ၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခွင့်ကို ဖျက်သိမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ချိန်တွင် သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ရမှတ်များကို ပြန်လည်ရယူခြင်း သို့မဟုတ် Loyalty အစီအစဉ်မှ ပေးသော အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များကို ရယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
သုံးစွဲသူ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကို ချက်ချင်း ဖျက်သိမ်းနိုင်ခွင့် အူရီဒူးတွင်သာရှိသည်။ သုံးစွဲသူမှ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအနက် မည်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုမဆို ချိုးဖောက်ပါက လည်းကောင်း၊ အူရီး၏၀န်ဆောင်မှုအား တစ်နည်းနည်းဖြင့် အလွဲသုံးစားပြုပါက လည်းကောင်း သုံးစွဲသူ၏ Loyalty အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကို ရပ်စဲမည် ဖြစ်သည်။
အူရီဒူးမှ သုံးစွဲသူ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကို ရပ်စဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုပါက စုဆောင်းထားသော Loyalty ရမှတ်များ အားလုံးကို သုံးစွဲသူ၏ စာရင်းမှ ချက်ချင်း ဖယ်ရှားမည်ဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူအနေဖြင့် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ကို ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် အတည်ပြုချက်ကို My Ooredoo App မှတဆင့် လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၂.၁။ Loyalty အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် သုံးစွဲသူသည် ၄င်း၏ Loyalty Account တွင် စာရင်းသွင်း မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် active ဖြစ်နေသော မိုဘိုင်းနံပါတ်တစ်ခုကို အူရီဒူးအားပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
၂.၂။ Loyalty အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းကြားစာများအားလုံးကို သုံးစွဲသူ ၏ Account တွင် register လုပ် ထားသော မိုဘိုင်းနံပါတ်သို့ SMS ဖြင့် ပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး My Ooredoo App တွင်လည်း ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂.၄။ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် အူရီဒူးမှ ၀ယ်ယူခဲ့သော ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သော အချက်အလက် များကို Loyalty အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အခါမှလွဲ၍ ပါဝင် ပတ်သက်သော မည်သည့် ကုမ္ပဏီထံသို့မျှ လွှဲပြောင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။ သုံးစွဲသူမှ အကျိုး ခံစားခွင့်တစ်ခုကို ပြန်လည်ရယူရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ပါဝင်ပတ်သက်သူ ကုမ္ပဏီသည် ၄င်းထံမှ သုံးစွဲသူမှ ၀ယ်ယူခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်ကို သုံးစွဲသူထံသို့ ကြော်ငြာရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ သုံးစွဲသူမှ ပါဝင်ပြီးဖြစ်သော database ကို update ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်စေ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၄င်းအနေဖြင့် Loyalty အစီအစဉ်၏ partner အဖြစ်မှ ရပ်စဲသွားသည့်တိုင်အောင် ထိုသို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
၃.၁။ မသမာမှုရှိသည်ဟု သံသယရှိပါက သုံးစွဲသူ၏ account အား စောင့်ကြည့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၃.၂။ သံသယရှိမှုကို အတည်ပြုနိုင်ပါက သုံးစွဲသူ၏ account အား ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
၃.၃။ သုံးစွဲသူ၏ account အား စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော နောက်ဆက်တွဲ ကိစ္စရပ်များအကြောင်း အူရီဒူးမှ သုံးစွဲသူထံသို့ ဆက်သွယ်ပြောကြားမည်ဖြစ်သည်။
၃.၄။ ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် တရားဝင် မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက account အား ပြန်လည်၍ ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
၃.၅။ ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မသမာကြောင်း တွေ့ရှိပါက account အား ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။
၃.၆။ မသမာမှု၏ အတိုင်းအတာနှင့် အူရီဒူးအပေါ် (ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော) ပျက်စီးနစ်နာမှုအပေါ် မူတည်၍ account အား ပယ်ဖျက်ခြင်းကို ကျော်လွန်ကာ တရားဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန်လည်း အူရီဒူးမှ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
၃.၇။ သုံးစွဲသူ၏ account တွင် အခွင့်အာဏာမရှိသော အကျိုးခံစားခွင့်များကို တောင်းဆိုခြင်းများ သို့မဟုတ် အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို သုံးစွဲသူမှ တင်ပြတိုင်ကြားပါက စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
၃.၈။ အခွင့်အာဏာမရှိဘဲ မည်သည့် ရမှတ်များရယူခြင်းမဆို နှင့် နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် မည်သည့် တရားမ၀င်သော အကျိုးခံစားခွင့်များရယူခြင်းမဆိုကို ဖြစ်ပေါ်သည့်နေ့မှ သုံးလ (၃လ) အတွင်း၌ အူရီဒူးထံသို့ သတင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး ထို့ထက် နောက်ကျသော တောင်းဆိုမှုများ သို့မဟုတ် စွပ်စွဲချက်များ ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်မဟုတ်ပါ။
၃.၉။ Loyalty အစီအစဉ်ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ partner များအနေဖြင့် မသမာမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် တာဝန်ပူးတွဲယူ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့အပိုင်းမှဖြစ်စေ၊ ၄င်းတို့၏ ၀န်ထမ်းများမှ ဖြစ်စေ ပါဝင်ပတ်သက်သော မသမာမှုများအတွက် ကြီးလေးသော တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
၃.၁၀။ မသမာသော လုပ်ဆောင်ချက်ရှိကြောင်း မည်သည့် သံသယမဆို ဖြစ်ပေါ်ပါက ပြည့်စုံသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Loyalty Account များကို ရပ်ဆိုင်းရန် အခွင့်အာဏာ အူရီဒူးတွင်သာရှိသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးချိန်တွင် Loyalty ရမှတ်များခွဲဝေခြင်းကို ဆိုင်းထားရန် အခွင့်အာဏာ အူရီဒူးတွင်သာရှိသည်။ ဤသည်ကို ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းအတွက် သီးခြား ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၄။ Loyalty အစီအစဉ်
၄.၁။ Loyalty အစီအစဉ်တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စာရင်းပေးသွင်းလိုက်သည်နှင့် Loyalty အဖွဲ့ဝင်သည် စတင်သုံးစွဲမှုအတွက် Loyalty ရမှတ်များကိုတစ်ကြိမ် အခမဲ့ လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ထို စတင်သုံးစွဲမှုအတွက် ရမှတ်များကို မည်သည့်နေရာတွင် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မည်ဆိုသော အချက်မှာ အူရီဒူး၏ သဘောဆန္ဒအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရမှတ်များကို My Ooredoo App တွင် ရယူ နိုင်သည်။
၄.၂။ Loyalty ရမှတ်များအတွက် Loyalty အကျိုးခံစားခွင့်များ လဲလှယ်ရယူခြင်းကို အမျိုးအစား သုံး (၃) မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် - ၁) အူရီဒူးကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၂) Games Pack များ နှင့် ၃) Loyalty Partner များ၏ လျော့ဈေးကူပွန်များဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော Loyalty အကျိုးခံစားခွင့်များကို အူရီဒူးမှ သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Loyalty အကျိုးခံစားခွင့်များကို အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲ ပိုင်ခွင့် အူရီဒူးတွင်သာရှိသည်။ အကျိုးခံစားခွင့်များကို My Ooredoo App၊ Website နှင့်/သို့မဟုတ် SMS မှတဆင့် ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်သည်။
၄.၃။ Loyalty ရမှတ်များ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း - Loyalty ရမှတ်များ၏ သက်တမ်းကို သတ်မှတ် နိုင်ခွင့် အူရီဒူးတွင်သာရှိပြီး ထိုသို့သောရမှတ်များကို အူရီဒူးမှ အချိန်မရွေး reset လုပ်နိုင်သည်။ ရမှတ်များသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့မတိုင်မီ ရက် သုံးဆယ် (၃၀) ကြိုတင်၍ Loyalty အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် register လုပ်ထားသော မိုဘိုင်းနံပါတ်သို့ SMS ပေးပို့ကာ ရက် သုံးဆယ် (၃၀) ကြာလျှင် သက်တမ်းကုန်မည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြားစာတွင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့် ရမှတ်စုစုပေါင်း နှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်တို့ကို အသိပေးပြောကြားမည် ဖြစ်သည်။
၅.၁။ Loyalty အစီအစဉ်တွင် ရယူနိုင်မည့် Loyalty အကျိုးခံစားခွင့်များ အားလုံးမှာ My Ooredoo App သို့မဟုတ် website တွင်ဖော်ပြ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း၊ သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ် တစ်ခုချင်းအလိုက် Loyalty နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန် အကြောင်းကြားခဲ့သည့် အတိုင်းသာဖြစ်သည်။ အူရီဒူးပစ္စည်းများဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သော Loyalty Partner များထံတွင် အသုံးပြုနိုင်သော Vouncher များဖြင့်ဖြစ်စေ သုံးစွဲသူ၏ Loyalty ရမှတ်များကို ပြန်လည် ရယူ ခံစားနိုင်သည်။
၅.၂။ ရယူထားသော Loyalty အကျိုးခံစားခွင့်များကို လွှဲပြောင်းခွင့်မရှိပါ။
၅.၃။ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ငွေဖြည့်သွင်း၍ အသုံးပြုထားသော အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့် ၀န်ဆောင်မှု တစ်ခုချင်းစီအတွက် ရမှတ်များ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Loyalty ရမှတ်များကို အသုံးပြု၍ ရယူထားသော မည်သည့် လျော့ဈေးရယူခြင်း (discount) အတွက်မဆို နှင့် မည်သည့် အကျိုးခံစားခွင့် ပြန်လည်ရယူခြင်း (redemption) အတွက်မဆို ရမှတ်များ ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
၅.၄။ ဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ - ရယူထားပြီး သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အသုံးပြုခြင်းမရှိသော Voucher များကို ဖျက်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ Voucher များ နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် Loyalty အကျိုးခံစားခွင့်များကိုမဆို ငွေကြေးဖြင့် လဲလှယ်၍ ငွေသားထုတ်ယူခွင့်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၆။ Partner များ
၆.၁။ Loyalty Partner များအား အူရီဒူးမှ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် Partner များနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များကို (ရှိခဲ့ပါက) လိုအပ်မည်ဟု ယူဆသည့်အတိုင်း အဖွဲ့ဝင်များအား အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၆.၂။ Loyalty အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော Loyalty Partner များသည် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို အစီအစဉ်မှ နှုတ်ထွက်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ၀န်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးမှုနှင့် ဆက်စပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်းကိုဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Loyalty အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူ မည်သည့် Partner မဆိုသည် ဤ အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်စေ၊ မည်သည့် Loyalty အကျိုးခံစားခွင့်မဆိုသည် ဆက်လက်ရရှိနေမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်စေ အူရီဒူးမှ အာမခံမည် မဟုတ်ပါ။
၆.၃။ Loyalty Partner များမှ ပေးအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သော Loyalty အကျိုးခံစားခွင့်များသည် Loyalty Partner များမှ ဆုံးဖြတ်သော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ နှင့် အညီသာ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။ ထိုသို့သော ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများကို ၀ယ်ယူခြင်း မပြုမှီတွင် သက်ဆိုင်ရာ Partner ထံတွင် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သုံးစွဲသူမှ စစ်ဆေး လေ့လာသင့်သည်။ My Ooredoo App တွင် လက်ရှိ အချိန်တွင် ရှိနေသော Loyalty Partner များ၏ စာရင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
၆.၄။ Loyalty Partner များမှ ပေးအပ်သော အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့် ၀န်ဆောင်မှုများ အားလုံး သည် အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသော Loyalty Communication တွင် ဖော်ပြ ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ Loyalty ရမှတ်များကို စုဆောင်းရန်အတွက် အရည် အချင်းပြည့်မှီသည်။
၆.၅။ သုံးစွဲသူမှ Loyalty Partner များ၏ ၀န်ဆောင်မှု/ကုန်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုသည့်အချိန်တိုင်း Loyalty ရမှတ် အတိအကျကို သုံးစွဲသူ၏ လက်ကျန်ရမှတ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်၍ လက်ကျန် ညှိပေး သွားမည်ဖြစ်သည်။
၆.၆။ Promotion/Offer ရက်များအတွင်း Partner များထံ၌ အကျိုးခံစားခွင့်များပြန်လည်ရယူခြင်း နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ထပ်မံ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို လက်ခံခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် Partner များ၏ သဘောဆန္ဒနှင့်အညီသာဖြစ်ပြီး အူရီဒူးမှ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
၇။ My Ooredoo App နှင့်/သို့မဟုတ် Website ကို အသုံးပြုခြင်း
၇.၁။ Loyalty အစီအစဉ်တွင် သုံးစွဲသူ၏ ပါဝင်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ My Ooredoo App နှင့်/သို့မဟုတ် Website ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ Loyalty အစီအစဉ်တွင် သုံးစွဲသူမှ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခြင်းအတွက် My Ooredoo App နှင့်/သို့မဟုတ် Website ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် မိတ္တူကူးခြင်းနှင့် print ထုတ်ယူခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ထိုသို့ ရယူအသုံးပြုနိုင်မှုကိုလည်းကောင်း၊ My Ooredoo App နှင့်/ သို့မဟုတ် Website တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကိုလည်းကောင်း မည်သို့သော ၀င်ငွေရှာဖွေမှုအတွက်မှ အသုံးချခွင့်မရှိပါ။ အူရီဒူးမှ စာဖြင့်ရေးသား သဘောတူညီထားခြင်း မရှိပါက My Ooredoo App နှင့်/သို့မဟုတ် Website တွင် ဖော်ပြထားသော အရာများကို (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ရည်ရွယ်ချက်မှ လွဲ၍ အခြားနည်းဖြင့် အသုံးချရန်အတွက် ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် မည်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်း တို့အပါအ၀င်) အခြားမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို အသုံးပြုခြင်း ကို တားမြစ်သည်။ အထူးအားဖြင့် My Ooredoo App နှင့်/သို့မဟုတ် Website တွင်ဖြစ်စေ၊ My Ooredoo App နှင့်/သို့မဟုတ် Website မှဖြစ်စေ ဖော်ပြထားသော မည်သည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် သတင်းကိုမဆို (အကျိုးအမြတ်ရသည်ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေ) မည်သည့် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ကြော်ငြာဆောင်ရွက်မှု အတွက်မျှ အသုံးချခြင်းမပြုရပါ။
၇.၂။ App သို့မဟုတ် Website တွင် ပါဝင်သော ဒီဇိုင်းများ၊ စာသားများ၊ အရုပ်များနှင့် အခြားသော အရာများအားလုံးတွင် ပါဝင်သော ဉာဏဖန်တီးမှုများသည်လည်းကောင်း၊ ထိုအရာများကို ရွေးခြယ်မှု သို့မဟုတ် စီစဉ်ချထားမှုသည်လည်းကောင်း အူရီဒူး နှင့်/သို့မဟုတ် ဉာဏဖန်တီးမှု များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ရှိသူတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်သည်။
၇.၃။ တရားဥပဒေအရ လိုအပ်သည်မှလွဲ၍ အူရီဒူးအနေဖြင့် My Ooredoo App သို့မဟုတ် Website နှင့်ဆက်စပ်၍ဖြစ်စေ၊ (မည်သည့် အမြင်များ သို့မဟုတ် သဘောထားမှတ်ချက်မဆို အပါအ၀င်) ၄င်းတို့တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ဖြစ်စေ မည်သည့် ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ အာမခံခြင်း သို့မဟုတ် မည်သို့သော သတ်မှတ်ချက်ကိုမျှ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါ။ My Ooredoo App သို့မဟုတ် Website တွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ဖော်ပြထားသော သတင်း နှင့်/သို့မဟုတ် အချက်အလက်များအားလုံးသည် လမ်းညွှန်မှုအနေဖြင့်သာ ဖော်ပြ ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော သတင်း နှင့်/သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို သုံးစွဲသူမှ သုံးစွဲရာတွင် ၄င်း၏ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်သာဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူမှ My Ooredoo App သို့မဟုတ် Website ကို အသုံးပြုခြင်းမှတဆင့် ဖြစ်စေ၊ My Ooredoo App သို့မဟုတ် Website ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက်မဆို အူရီဒူး၊ ၄င်း၏ ဒါရိုက်တာများ၊ ၀န်ထမ်းများ သို့မဟုတ် အခြား ကိုယ်စားလှယ်များ ၏ တာဝန်ရှိမှုကို တရားဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ဖယ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကို အတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။
၇.၄။ My Ooredoo App သို့မဟုတ် Website တွင် အစီအစဉ်၌ ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီများ နှင့်/ သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ပိုင်ဆိုင်သော နှင့်/သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်သော Website နှင့်/သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများသို့ Link များ ပါဝင်နိုင်သည်။ ၄င်းတို့ကို သုံးစွဲသူမှ အသုံးပြုရ လွယ်ကူစေရန်အတွက် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး အူရီဒူးအနေဖြင့် ထိုသို့သော မည်သည့် Website များ နှင့်/သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများအတွက်မှ မည်သည့် အာမခံချက်ကိုမျှ မပေးပါ၊ သို့မဟုတ် မည်သို့သော ကိုယ်စားပြုမှုကိုမှ မပြုပါ။ ထို့အပြင် ထိုသို့သော Websiteများ ကို သုံးစွဲသူမှ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ (ဥပဒေမှ လိုအပ်သော အတိုင်းအတာမှ ကျော်လွန်၍) မည်သည့် တာဝန်ဝတ္တရား သို့မဟုတ် တာဝန်ခံခြင်းမှ မရှိပါ။
၇.၅။ အင်တာနက်၏ သဘောသဘာဝအရ၊ ဤ Website အား အပြည့်အ၀၊ အမှားအယွင်း ကင်းစွာ လည်ပတ်စေမည်ဟု အူရီဒူးမှ ကတိမပြုပါ။
My Ooredoo App သို့မဟုတ် အူရီဒူး Website တွင် ဖော်ပြထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ လိုဂိုများ (Trademarks၊ Logos) နှင့် ၀န်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ (Service Marks) (စုပေါင်း၍ “အမှတ်တံဆိပ်များ (Marks)” ဟု ညွှန်းဆိုမည်) သည် ဖြစ်စဉ်အပေါ်လိုက်၍ အူရီဒူး၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် Loyalty Partner ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ အူရီဒူး သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်ကို ပိုင်ဆိုင်သူ၏ စာဖြင့် ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ မည်သည့် အမှတ်တံဆိပ်များကိုမဆို World Wide Web ပေါ်ရှိ အခြား စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် site များ ပေါ်တွင် မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မဆို အသုံးချခြင်းမှ တားမြစ်သည်။ My Ooredoo App သို့မဟုတ် Website ပေါ်တွင် သို့မဟုတ် My Ooredoo App သို့မဟုတ် Website မှတဆင့် ရရှိသော မည်သည့် software program တွင်မဆို ပါဝင်သည့် အချက်အလက်နှင့် ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာ (Content) အားလုံး (စုပေါင်း၍ “ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ (Content)” ဟု ရည်ညွှန်းမည်) ကို မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ ကြော်ငြာရန် အတွက်သော်လည်းကောင်း ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်သော်လည်းကောင်း My Ooredoo App သို့မဟုတ် Website တွင် ဖော်ပြထားသော မည်သည့် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ မဆိုကို ပြုပြင်ခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖော်ပြ ပြသခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ လိုင်စင်ရယူခြင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့်ပွား၍ ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းတို့အား တားမြစ်သည်။
Loyalty အစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းများ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု ဈေးနှုန်းများဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များကို ကြိုတင်အသိမပေးဘဲ Loyalty အစီအစဉ်မှ မည်သည့် Loyalty Account မဆို နှင့် Loyalty Account အားလုံးကို အခါအားလျော်စွာစာရင်းစစ်ဆေး ခွင့် အူရီဒူးတွင်သာရှိသည်။ အကယ်၍ စာရင်းစစ်ရာတွင် မကိုက်ညီမှုများ သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်မှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက အူရီဒူးမှ ကျေနပ်လောက်သည်အထိ ထို မကိုက်ညီမှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်သည့်ကာလအထိ Loyalty အကျိုး ခံစားခွင့်များကိုတွက်ချက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် Account အတွက် ရှင်းတမ်းများထုတ်ပေးခြင်းတို့မှာ နှောင့်နှေးနိုင်သည်။
၁၀။ Loyalty အစီအစဉ်ကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း
၁၀.၁။ ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲ၊ အဖွဲ့ဝင်များသို့ မည်သည့် အဖိုးအခမှပေးလျော်စရာမလိုဘဲ ဤ Loyalty အစီအစဉ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို တစ်ခုလုံးဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ ပြင်ဆင်ခွင့် အူရီဒူးတွင်သာရှိသည်။
၁၀.၂။ ဤ Loyalty အစီအစဉ်ကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဖျက်သိမ်းခွင့် အူရီဒူးတွင်ရှိသည်။ အူရီဒူး အနေဖြင့် Loyalty အစီအစဉ် ဖျက်သိမ်းကြောင်းကို သုံးစွဲသူထံသို့ ကြိုတင်အကြောင်း ကြားရန်အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု အားလုံးကို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
၁၁။ ဥပဒေ နှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
၁၁.၁။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် ဖော်ပြပါရှိသော မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန် နှင့် ကျင့်သုံးရန်အခွင့် အူရီဒူးတွင်သာရှိသည်။ ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် အူရီဒူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးသည် နောက်ဆုံးနှင့် အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
၁၁.၂။ Loyalty အစီအစဉ်၏ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် Loyalty အစီအစဉ်အတွက် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များကိုပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် Loyalty အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရယူခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးချခြင်း နှင့် ဆက်စပ်၍ အချက်အလက် မမှန်မကန် တင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် အူရီဒူး သို့မဟုတ် Loyalty အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော အခြား Loyalty Partner များ၏ ၀န်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ မည်သည့် အူရီဒူးဝန်ထမ်းအပေါ်တွင် မလျော်ကန်သော အပြုအမူ ပြုမူခြင်း သို့မဟုတ် အူရီဒူးဝန်ထမ်းများ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ငြင်းဆန်ခြင်းတို့ အပါအ၀င် အူရီဒူးမှ မသင့်လျော်သော အပြုအမူ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော အခြားမည်သည့် အပြုအမူမဆိုတို့ အကျုံးဝင်သော မလျော်ကန် သော အပြုအမူကို အဖွဲ့ဝင်သည် တမင်တကာရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ပါက သို့မဟုတ် Loyalty အစီအစဉ်ကို ထိန်းချုပ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်ပါက ၄င်းအဖွဲ့ဝင်ကို Loyalty အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်ပါဝင်ရန် အရည်အချင်းမပြည့်မှီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ စုဆောင်းထားသော Loyalty ရမှတ်များ အားလုံးကို ပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့် Loyalty အကျိုး ခံစားခွင့်များအတွက် အစားထိုးပေးလျော်စေခြင်း တို့ကို ၄င်း၏ တစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ် စီရင်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် အူရီဒူးတွင်သာရှိသည်။
၁၁.၃။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်တကွ အူရီဒူးနှင့် Loyalty အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီတို့အကြားရှိ ဆက်ဆံရေးအား England နှင့် Wales ဥပဒေမှ စိုးမိုးသည်။
၁၁.၄။ အကယ်၍ မည်သည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်မဆို ဤ Loyalty အစီအစဉ်၊ Loyalty ရမှတ်များ သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်များရယူခြင်း တို့သည် တရားဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ခြင်း ၊ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်နေခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ထိုသို့သော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ထိုသို့သော ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သော အတိုင်းအတာတွင် ရမှတ်များ သို့မဟုတ် Loyalty အကျိုးခံစားခွင့်များပေးခြင်း သို့မဟုတ် ရယူခြင်း နှင် ဆက်စပ်နေသော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည် တရားမ၀င်၊ ပျက်ပြယ်သည်။